Achicha na apple bọọlụ, mfe, siri na nnọọ ọgaranya | Usoro ọgwụgwọ
Ogbo achicha na bọọlụ apụl na efere mmiri
NriNkeji 60Ndị mmadụ 12Kalori 340
Anyị na-aga ebe ahụ mfe ogbo achicha, butter na ụfọdụ mkpụrụ n’elu.
Anyị na-aga ime ya otu nri efere nke ga - abụ nke anyị ga - eweta na tebụl. Ọ bụrụ n’inweghị isi mmalite dịka nke ị na-ahụ na foto ahụ inwere ike iji kichin achicha ị na - emebu.
Anyị ga-eme mgwakota agwa, anyị ga-etinye ụfọdụ apụl bọọlụ n'elu ma, ozugbo esi na oven, mgbe ọ jụrụ, anyị ga-eji achicha ogbo anyị were ntụ ntụ. Nke ahụ dị mfe.
1 Ogbo achicha na bọọlụ apụl na efere mmiri
Agbo achicha nwere bọọlụ apụl na anụ dị nro ma dịkwa nro.
Nri oge: 50M
Oge niile: 1H
200 g ntụ ọka
50 g ọka ọka
10 g nke yist maka ụdị Royal dị ụtọ
80g mmiri ara ehi
80 g nke yogot eke
Anyị na-etinye oven na 180 Celsius.
Anyị na-etinye butter na iko na mmemme Nkeji 4, 60 Celsius. ọsọ 1. Anyị na-ewepụ bọta gbazee ma debe ya.
Anyị na-etinye na iko na shuga na akwa Anyị na-agwakọta site na mmemme 1 nkeji, 30 sekọnd, ọsọ 4.
Tinye ntụ ọka, ọka ọka, yist, mmiri ara ehi na yogọt. Anyị na-Mmemme 1 nkeji na 30 sekọnd, ọgọ ọsọ.
Anyị ibughari 1 nkeji na 30 sekọnd, ọgọ ọsọ na, na UM UBARA na-efegharị, anyị ịgbakwunye gbazee butter.
Anyị na-etinye mgwakota agwa anyị na efere achicha dị ka nke a hụrụ na foto ahụ (ihe dịka 30 × 18 centimeters), ma ọ bụ na a akụkụ anọ ma ọ bụ ọbụna gburugburu achicha achicha n'etiti 22 na 26 centimeters na dayameta.
Anyị na-asa apụl abụọ ma jiri bọọlụ kwesịrị ekwesị jiri bọọlụ mee bọọlụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ya, anyị na-egbutu ha iberibe ma ọ bụ ịkpụ. Anyị na-etinye mkpụrụ apụl n'elu.
Anyị na-akpọọ nkụ na 180° ihe dị ka nkeji 40.
Hapụ ya oyi. Ozugbo oyi na-atụ, fesaa shuga icing n’elu ala.
Chọpụta ntụziaka ndị ọzọ nke: Shoplọ ahịa achicha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Thermorecetas » Thermomix Ezi ntụziaka » Shoplọ ahịa achicha » Ogbo achicha na bọọlụ apụl na efere mmiri
Ahụrụ m blog gị n'anya. Kwa ụbọchị ị na-eju m anya site na usoro nri dị iche. Nke itinye nri kwa ụbọchị nwere nnukwu uru, n'ihi na enwere blọọgụ na-etinye naanị otu ụzọ n'izu ma ọbụghị nke ahụ! Ọ bụ ya mere ị ji bụrụ blọọgụ thermomix kachasị amasị m. Gaa n'ihu dị ka nke a. Echiche kacha mma.
Zaghachi María Josefa
Ana m ekele gị nke ukwuu, María Josefa, dịkwa n'aka ndị ọrụ ibe m. Gaghị echetụ n'echiche na ịgụrụ gị ozi emeela ka anyị kiss Nnukwu nsusu ọnụ
Ngwurugwu ọkụkọ kachasị sie ụtọ na nke kachasị atọ ụtọ
Bee achicha eji piich